Sidaad ugu diyaargaroobi lahayd XaaladDed-Deg Ah
Laba meelood oo aad ku badbaado waa intaasoo ay lagama maarmaan ay noqot inaad ka baxdo hooygaaga. Waxaana muhiim ah inaad joogtid meel aad ugu dhow meesha deggan tahay sida Rugta Keydka Buugaagta (Library) ama Xarunta Bulshada oo kale. Meesha kalena waxaa waajib ah iney aad ugu fogaato meesha aad deggan tahay waa intaasoo xaaladdaasi deg deg deg ahi ay saamayso aag aad u ballaaran.
Qorshe aad kula xariirto Qoyskaaga. Marka lagu gudo jiro xaalad deg-deg ah, waxaa suurtagal noqon karta ineyna shaqeynin khadadka telefoonada iyo nidaamyada warbaahintuba. Sidaas darted, waa inaad haysatid (garatid) midamalabo qof oo adiga iyo kuwa adiga ku jecelba aad wici kartaan si aad ula xariirtaan wixii war ahna aad ula wadaagtaan.
U-diyaar-garow inaad ka baxdo hooygaaga. Qorsheyso sidii aad u tegilahayd meel badbaadsan haddii talo lagu bixiyo in guryaha laga baxo. Diyaarso Xirmo aad ku sabatabaxdo (eeg/fiiri tallaabada 2-aad).
Qorshe u same xayawaanka aga rabbaysan ee guriga kuu jooga. Sida badan, waxaa loo oggol yahay oo keliya xarumaha dadka lagu qaabilo xayawaanka dadka u adeegga. Sidaas darteed, garo qof kuu daryeeli kara xawayaankaaga haddii lagama maarmaan ay noqoto inaad ka tegtid hooygaaga.
• Si aad si fiican u fahamto , ficil ahaan kula tababbaro oqorshehaaga
La-xariir xafiiska dawladdaada hoose si aad u hesho lambarka telefoonka aad isticmaali lahayd si aad u hesho macluumaad dheeraad ah marka lagu gudo jiro xaalad deg-deg ah (211, 311 ama mid kale). Isticmaal oo keliya 911 marka uu qof u baahan yahay kaalmo deg-deg ah si loo ilaaliyo caafimaadkooda, badbaadintooda ama hantidoodaba.
□ Waxyaabo gaar u ah xubnaha kale ee qoyskaaga (dheybarrada iyo foormulooyinka carruurta, i.w.m.).